पर्यटकीय संभावना वोकेको नारद पोखरीमा मेला | BIVAS
← पहिरो गयेको गयै छ, मानिस जाने ठाउं कतै छैन
जिर्ण वृद्धाश्रम, पानी पर्नासाथ वृद्धाहरूको विचल्ली →
पर्यटकीय संभावना वोकेको नारद पोखरीमा मेला
गोरखा जिल्लाको वारपाक गाविसको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने प्रसिद्ध पोखरी नारद पोखरीमा ०५१ सालदेखि तीर्थयात्रीहरुको घुइंचो लाग्न थालेको हो । पहिले नगण्य रुपमा मात्र तीर्थयात्रीहरु आउने गरेपनि केही वर्षदेखि यो पोखरीमा नुहाउन आउनेहरुको संख्या हृवात्तै बढेको छ । यस वर्ष वाहिरवाट मात्रै ४ सय भन्दा बढी तीर्थयात्रीहरु पोखरीमा नुहाउन आएका छन् । दीर्घरोग निको हुने र मनले चिताएको पुग्ने विश्वास लिएर नारद पोखरी आइपुग्नेहरुमा केटाकेटीदेखि वुढाबुढीसम्म छन् । पैदल हिड्न नसक्ने र घर कुर्नेहरु बाहेक सबै वारपाकीहरु नारद पोखरी नुहाउन पुग्ने गर्दछन् भने छिमेकी गाविसबाट आउनेहरु पनि उत्तिकै छन् । पोखरीमा आउने तीर्थयात्रीहरु रातभर गीत गाएर रमाइलो गरेपछि विहान पोखरीमा नुहाएर जनै-डोरो बांधी पुजा आजा तथा भगवानसंग वर माग्ने गर्छन् । पोखरीमा सयौं तीर्थयात्रीहरु आएकाले पनि पोखरीको महत्व झल्किएको छ भन्नुहुन्छ वारपाकका लाल बहादुर गुरुङ ।
गाउँबाट बिदेशीएका र बसाई सरेर बाहिर गएकाहरु पनि पूर्णीमामा यस पोखरीमा नुहाउनको लागि आउने गरेका छन् । दुइ दिनको कठिन यात्रा हिडेरै पार गर्दै वारपाकीहरु वर्षमा एकपटक जसरी पनि पोखरीमा नुहाउन आइपुग्छन् । जनैपुर्णिमा साउनमा परेको वर्ष पोखरीमा नुहाउनेको भीड अझै बढी हुन्छ । भदौमा मौसम प्रतिकुल हुने जनविश्वासका कारण साउनमा पुर्णिमा परेको वर्ष धेरै तीर्थयात्रीहरु यस पोखरी मेलामा आउंछन् । साउनमा जनैपुर्णिमा परेकाले नै वालवच्चासहित पोखरी आएको गोरखा सदरमुकाममा वासोवास गर्दै आउनुभएकी धन कुमारी घले बताउनुहुन्छ ।
वारपाकीहरु पोखरीमा जाने भनेपछि नगएमा दुख पाइने विश्वास गर्छन् । त्यसैले प्रतिज्ञा गरेअनुसार जसरी पनि पोखरी पुग्नुपर्ने तीर्थालुहरुको विश्वास छ । पहिलेको प्रतिज्ञा पुरा गर्नै पोखरी आएको काठमाडौकी निशा घले बताउनुहुन्छ ।
वारपाक गाउंदेखि २ दिन पैदल यात्रामा मात्र पुग्न सकिने र पोखरी दुर्गम क्षेत्रमा परेकाले प्रचारमा आउन नसकेको वारपाकीहरुको भनाइ छ । पोखरीको प्रवर्द्धनमा जुटेका वारपाक महिला समाजकी संयोजक दलकुमारी घलेका अनुसार पोखरीलाई प्रचार गर्न यसवर्षदेखि वारपाकी महिलाहरु सक्रिय भएर लागेका छन् ।
सयौं तीर्थयात्रीहरुको विश्वास जित्न सफल यो धार्मिक स्थलको प्रचार प्रसार गर्न सकेमा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्न सकिने कुरा निर्विवाद छ । पोखरीको प्रचारमा वारपाकका महिलाहरुले देखाएको सक्रियतामा सबैले सहयोग गर्ने हो भने गोसाइंकुण्ड या दुधपोखरी भन्दा कम महत्वको छैन यो नारदपोखरी ।
One response to “पर्यटकीय संभावना वोकेको नारद पोखरीमा मेला”
अगस्ट 7, 2009 at 2:59 बेलुका
ए हो र ? गोरखामा पनि यस्तो ठाउं फेला पर्यो ? ल धन्यवाद विनोदजीलाइ समाचार खोजी ल्याउनुभएकोमा अनि विभाषलाइ समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा ।